Home Wararka Maxa ka jira sheegashada Galmudug inay Al Shabaab ka saareen Xaradheere?
Maxa ka jira sheegashada Galmudug inay Al Shabaab ka saareen Xaradheere?
Ciidamada DFS iyo kuwa Galmudug ayaa waxa ay maalmihii u danbeeysay sheeganayeen in ay ururka Al Shabaab ka saareen degaano hoos yimaada Galmudug, gaar ahaan degamada Xaradheere. Dagaalka ka socda Galmudug ayaa ah mid siyaasadeeysan oo u muuqda in warara xaqiiqda ka fog hawada la isku marinaayo.
Taliska Ciidamada Milatariga Soomaaliya, ayaa shaaciyay in ay ku wajahan yihiin degmada Xarardheere ee Gobolka Mudug, halkaas oo ay ku xooggan yihiin ururka Al-shabaab. Waxaa xaqiiq ah in Al Shabaab weerar lagu qaaday iyada oo dhanka cirkana uu Maraykanka ka caawinayo ciidamada Soomaalida, laakiin waxaa jira warar sheegaya in aan Al Shabaab laga saarin deeganada ay sheegatay Galmudug.
Taliyaha Ciidanka Dhulka Milatariga Soomaaliya, Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi, oo warbaahinta la hadlay, ayaa sheegay in maalmaha soo socda ay Al-shabaab ka saari doonaan degmada Xarardheere iyo tuulooyinka.
“Qorshaheena labaad waxaa uu yahay oo aan ku wajahanahay in aan cadowga ka sifeyno Xarardheere, waxaana Ummadda Soomaaliyeed ay ku farxi doonaan kolkaan idinkala soo hadlo Xarardheere oo aan cadowga ka ciribtirno halkaas”.Ayuu yiri Taliyaha ciidanka Dhulka Xoogga dalka.
Shacabka Galmudug waxaa ay soo dhaweeynayaa dagaalka ka dhanka ah Ururka Al Shabaab, laakiin waxa lama huraan ah hogaanka Galmudug ay warbaahinta u soo bandhigaan meelaha ay qabsadeen si shacabka u arkaan, isla markaana ka fogaadaan hadalada ka fog xqiiqda ee niyad jabka u keeni kara shacabka Soomaaliyeed.